UMaimane uthi uRamaphosa ngeke asalisiza ngalutho izwe | isiZulu
EZINGENA MANJE: Usemenyezelwe njengomengameli omusha we-ANC uRamaphosa
UMengameli Zuma uthi uyajabula ngendima ayidlalile kwi-ANC
Izangoma zithi uRamaphosa nguye umengameli olandelayo we-ANC
Johannesburg - I-ANC isindwe yizinyawo ekukhetheni uCyril Ramaphosa njengomholi wayo, njengoba lokhu kungeke kusabasiza ngalutho abantu baseNingizimu Afrika asebevele besenkingeni yokubhuqwa yindlala nokuntuleka kwemisebenzi, kusho umholi we-DA uMmusi Maimane.
"I-ANC isifile futhi lokho ngeke kusaguquka, akukhathaleki ngubani ophethe. Yingoba vele le nhlangano ihlangene ngenkohlakalo kanti ukungena kukaCyril ngeke kuguqule lutho," kusho uMaimane esitatimendeni.
Uthe ikusasa leNingizimu Afrika lilele ngaphandle kwe-ANC: "Kusezandleni zabavoti manje ukuthi balethe uguquko ngokukhipha i-ANC emandleni ngokhetho luka-2019."
Ukhala ngokuthi uRamaphosa usenkingeni yokuhola inhlangano ehlukene phakathi.
OLUNYE UDABA: EZINGENA MANJE: Usemenyezelwe njengomengameli omusha we-ANC uRamaphosa
"URamaphosa manje usenkingeni yokuhola inhlangano eqhekekile, engogombelakwesayo futhi esikhohliwe ngabantu abantulayo kanjalo nabangasebenzi. Iqiniso wukuthi, akukhathaleki i-ANC iholwa ngubani kepha ngeke kushintshe lutho," kusho uMaimane.
Lo mholi ukhiphe lesi sitatimende ngemuva kokumenyezelwa kobuholi obusha be-ANC engqungqutheleni ebanjelwe eNasrec, eGoli, ngoMsombuluko.
UMaimane uthi isiminingi iminyaka uRamaphosa esebenza noMengameli Jacob Zuma kepha ethule ebuka inkohlakalo yenzeka phambi kwakhe.
"Lokhu kusho ukuthi inkohlakalo nokucindezela abantu bezwe kusazoqhubeka," esho.